Robitel's 'Escape Room' Trailer bụ Aghụghọ Aghọ - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Robitel's 'Escape Room' Trailer bụ Aghụghọ Aghọrị
Robitel's 'Escape Room' Trailer bụ Aghụghọ Aghọrị
by Timothy Rawles October 19, 2018 843 echiche
Ọ bụ mmetụ mara mma maka trailer na-emeghe na "Little Boxes" nke Malvina Reynolds, maka ihe nkiri banyere ndị na-anwa ịgbanahụ ha site na iji naanị uche ha.
Nke a bụ setịpụrụ maka aha Adam Robitel nke dabara adaba Ụzọ Izere nke na-abanye n'ụlọ ihe nkiri na Jenụwarị 2019. Robitel bụ onye a na-ele anya kemgbe ya Inweta nke Deborah Logan ghọrọ òtù nzuzo. Ọ gbasoro nke ahụ na nnukwu ọganiihu Eduhie: Igodo Ikpeazụ.
Site n ’ihe nkiri ọhụụ ya pụtara ọhụrụ, ọ na-agbaso isi okwu ndị sitere na mmụọ karịrị mmụọ ma na-ekwupụta atụmatụ na-agbagọ agbagọ. Ọ bụrụ na a mụrụ gị ụnyaahụ aha ahụ na-ezo aka na nnukwu nnọkọ mmekọrịta mmadụ na ibe kemgbe karaoke.
Egwuregwu ahụ dị egwu na-amalite site na itinye otu ìgwè n'ime ụlọ a na-ahazi oge nwere oge iji chọta ụzọ tupu mkpu apụ. Robitel ewerela echiche ahụ ma mee ka ọ bụrụ ihe na-enyo enyo na ụjọ.
Nke a bụ nkọwa nchịkọta nke gọọmentị:
“Roomzọ mgbapụ bụ ihe na-atọ ụtọ banyere mmụọ banyere ndị bịara abịa isii na-achọta onwe ha n'ọnọdụ ndị karịrị ha ike, ha ga-ejikwa amamihe ha chọta ihe kpatara ya ma ọ bụ nwụọ. ”
Ụzọ Izere ga-emeghe na ihe nkiri Jenụwarị 2019.